All Articles - Page 8 of 38 - Shop
နံရံကပ်ပန်ကာတွေအကြောင်းသင်လေ့လာဖူးလား?0633
The KaungHtet September 28, 2020 10:31 am January 14, 2022
Shop.com.mm မှာ နံရံကပ်ပန်ကာတွေအပြင် ပန်ကာအမျိုးမျိုးကိုဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီ။ ဝယ်ယူရန် 📲 သင့်ဖုန်းထဲမှာ Shop App ရှိရုံနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူဈေးဝယ်နိုင်လို့ ခုပဲ Download လုပ်လိုက်ရအောင် …. To Download Shop MM app Shop …
သင်ရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ဖုတ်တဲ့ ကိတ်မုန့်ဟာ ဘယ်ကိတ်မုန့်တွေနဲ့မှ မယှဉ်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ကိတ်မုန့်ဖုတ်ခြင်းသည်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတိုင်းတာခြင်း၊ ၎င်းတို့ကိုမှန်ကန်သောအစဉ်အတိုင်းရောစပ်ခြင်းနှင့်ကိတ်မုန့်ကိုမီးဖိုထဲမှာ အသင့်တင့်ဖုတ်ခြင်းစတဲ့ အစီအစဉ်လိုက်မှန်ကန်အောင်လုပ်ဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ Vanilla ကိတ်မုန့် နဲ့ ချောကလက်ကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 🔸 Vanilla Cake 🔸 Vanilla Cake …
Shop ရဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကျဖြစ်ပြီး ၆နှစ်ပြည့်လဲဖြစ်တဲ့ Shop Anniversary အထူးစျေးရောင်းပွဲတော်0328
The KaungHtet September 23, 2020 11:50 am October 12, 2020
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း နဲ့ ဆံသားကြမ်းခြင်းတွေကိုသက်သာစေဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ0781
The KaungHtet September 21, 2020 9:28 am January 11, 2022
ဆံပင်ဆိုတာ လူတွေရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ အလှပြင်ထားပါစေ ဆံပင်ပုံကျပါမှ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်မှာပါ ။ ဒီလို ဆံပင်လှလှလေးတစ်ခုရဖို့အတွက် ဆံပင်ကို အမျိုးမျိုးပုံဖော်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက ဆံပင်တွေကို ပျက်ဆီးရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ ကဲအဲ့တာဆိုရင် ဆံပင်တွေပျက်စီးခြင်းနဲ့ ရှုပ်ထွေးစေခြင်းတွေကို ပြေလည်စေဖို့အတွက် …
သင်ဟာ အိပ်စက်ခြင်းကို မြတ်နိုးတဲ့သူတစ်ယောက်လား?02213
The KaungHtet September 18, 2020 8:13 am January 10, 2022
Shop App MM မှာ သင့်ကိုနှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်စေမယ့် သက်တောင့်သက်သာရှိစေမည့် ကုတင်တွေနဲ့ မွေ့ရာတွေကို ဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီ။ >>> ဝယ်ယူရန် <<< 📲 သင့်ဖုန်းထဲမှာ Shop App MM ရှိရုံနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူဈေးဝယ်နိုင်လို့ ခုပဲ …
Iphone နဲ့ Android Phone တွေ ရဲ့ အဓိကကွာခြားချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ?0628
The KaungHtet September 18, 2020 8:11 am January 11, 2022
‌‌များသောအားဖြင့် လူတွေဟာ Iphone နဲ့ Android Phone တွေမှာ ဘယ်ဟာကပိုကောင်းလဲဆိုတာပြိုင်ဆိုင်နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲဆိုတာကအရေးမကြီးပါဖူး။ တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ Android Phone တွေဟာလဲ Iphone တွေနီးပါး နည်းပညာတွေတိုးတက်လာခဲ့ပြီး မတူညီတဲ့ နည်းပညာမျိုးစုံနဲ့ …
Gaming Console တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သင်ဘယ်လောက်များများသိလဲ?02175
The KaungHtet September 16, 2020 10:11 am September 16, 2020
Stay Home and eat what you want: အိမ်မှာနေရင်း စားသုံးသင့်တဲ့ ခေါက်ဆွဲပြုတ်အမျိုးအစားများ0461
The KaungHtet September 15, 2020 11:48 am September 15, 2020
အိမ်မှာနေရင်း ချက်ပြုတ်စားသောက်ရမှာအဆင်မပြေတဲ့သူတွေရော ညကြီးသန်းခေါင်မှ ဗိုက်ဆာတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ ခေါက်ဆွဲပြုတ်တွေဟာများသောအားဖြင့် စားသောက်လေ့ရှိတဲ့အစားစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ခေါက်ဆွဲထုတ်/ဘူး တွေထဲမှာမှ Stay Home ကာလအတွင်း စားသုံးသင့်တဲ့ ခေါက်ဆွဲထုတ်/ဘူးတွေကို ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Samyang Ramen Noodle ‌ဒါလေးကတော့ အစပ်ကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေရော၊ …
အွန်လိုင်း အလှဗွီဒီယိုတွေရိုက်တဲ့အခါ မိမိကိုပေါ်လွင်စေမယ့် ဖက်ရှင်ပစ္စည်းများ0472
အွန်လိုင်း အလှဗွီဒီယိုတွေကစားတဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဖက်ရှင်တွေကို သူများတွေထက်ပိုပြီးတောက်ပြောင်နေဖို့အတွက် ဖက်ရှင် Accessories ပစ္စည်းတွေနဲ့ Fancy ပစ္စည်းတွေရှိထားဖို့လိုပါတယ်။ Fancy ပစ္စည်းတွေဆိုရင် များသောအားဖြင့် မိန်းကလေးတွေအတွက်ပဲရှိကြတယ်ထင်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယောကျာ်းလေးတွေအတွက်လဲ သင့်တော်တဲ့ Fancy ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်။ …
သင်ဟာ ငါးတွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ယောက်လား?02276
The KaungHtet September 14, 2020 9:39 am September 14, 2020